မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိုဘားမား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနှင့် ဆွေးနွေး | မျိုးရခိုင်
Posted on March 15, 2009 by nyisoe	ကမ္ဘာတ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ တခြားကိစ္စရပ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမား ဟာ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်စကား ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့အားထုတ်မှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သမ္မတ အိုဘားမား က ခေါင်းဆောင်သုံးယောက်ကို အဓိကထား ပြောခဲ့တယ်လို့ အိမ်ဖြူတော်က ပြောပါ တယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ဖို့ အမေရိကန်နဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ဆော်ဒီဘုရင် အက်ဘ်ဒူလာ (Abdullah) နဲ့ တယ်လီဖုန်းပေါ်မှာ စကားပြောစဉ်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက အသေအချာ ထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ အိမ်ဖြူတော်က ပြောပါတယ်။ Like this:Like Loading...	Filed under: Uncategorized « Hello world! စံပြကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံရ »